नेप्से भनेको के हो ? नेप्से परिसूचक कसरी निर्धारण गरिन्छ । सेन्सेटिभ परिसूचक भनेको के हो ? - यथार्थ खबर
नेप्से भनेको के हो ? नेप्से परिसूचक कसरी निर्धारण गरिन्छ । सेन्सेटिभ परिसूचक भनेको के हो ?
Rojjan Raj Pandey २६ भदौ २०७८, शनिवार
नेप्से भनेको के हो ? नेप्से परिसूचक कसरी निर्धारण गरिन्छ ? सेन्सेटिभ परिसूचक भनेको के हो ?
शेयर बजारको व्यवस्थापन गर्ने नेपालको एकमात्र संस्था नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको छोटकरी रूप नै नेप्से हो । शेयर बजारको पूँजीकरणको मापन गर्नका निम्ति नेप्से परिसूचक (इण्डेक्स) गणना गरिन्छ । यसले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सबै कम्पनीको पूँजीकरण घटेको वा बढेको सङ्केत गर्दछ ।
कुनै दिनको अन्तिम मूल्यलाई सम्बन्धित कम्पनीका
सम्पूर्ण शेयरको सङ्ख्याले गुणन गरी सबैको
गुणनफललाई जोडेर बजार पूँजीकरण निकालिन्छ ।
यसैलाई नेप्सेमा सूचीकृत सम्पूर्ण शेयर सङ्ख्याले
भाग गरेर नेप्से परिसूचक निकालिन्छ । नेप्से परिसूचक बढयो भने सामान्य अर्थमा बजारमा शेयरको माग बढेको भन्ने बुझिन्छ । त्यसले देशको आर्थिक उन्नतिको शुभ लक्षण दिन्छ । अतः नेप्से बढ्न शुरू हुँदा सामान्यतया शेयर किन्ने गरिन्छ । यो परिसूचक घटनुको
अर्थ लगानीकर्ता निराश भएको वा लगानी गर्न अनिच्छुक भएको तथा देशको आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गएको भन्ने बुझिन्छ ।
नेप्से घट्न शुरू भएपछि जतिसक्दो छिटो बेचेर
बढी पैसा प्राप्त गर्न सबै लगानीकर्ता इच्छुक हुन्छन् ।
नेप्सेमा सूचीकृत भएका 'क' वर्गमा वर्गीकृत कम्पनीको अन्तिम मूल्यको आधारमा निकालिएको परिसूचकलाई सेन्सेटिभ परिसूचक भनिन्छ । यो परिसूचक निकाल्दा माथि वर्णन भएको विधिमा केवल 'क' वर्गका कम्पनीलाई मात्रै समावेश गरिन्छ । शेयर मूल्यमा
भएको कमीले परिसूचकलाई घट्छ भने वृद्धिले
परिसूचक पनि बढ्छन् ।
यी परिसूचकको घटबढले शेयर बजारको पूँजीकरणमा असर पार्दछ ।
महिला लघुवित्तको आईपीओ माघ २८ गतेदेखि बिक्रि खुला गरिने
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले आईपीओ वितरण 6,276 अनुप्रयोगहरू रद्द
साधारण सेयर निष्कासनको तयारीमा जुट्यो बुद्धभूमी हाइड्रो
चन्द्रागिरी हिल्सको आईपीओ खुल्यो
नेप्सेको ३९ औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धमा
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB) ले गत आर्थिक वर्षको वितरण योग्य मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ।
यसरी गर्शेनुहोस यर बजार घाटा बिमा
साझेदारी गर्नका लागि कुनै मुडमा बजार सेयर
सेयर बजारमा भएको उच्च वृद्धि चलखेलबाट भएको धितोपत्र बोर्डको एक अध्ययनले देखाएको छ
नेपाल फाइनान्सको १६ लाख हकप्रद सेयर मंसिर ४ गतेदेखि बिक्रीमा
‘आइपिओ’ भर्न इच्छुक हुनुहुन्छ ? मंसिर ३ गतेदेखि यो कम्पनीको सेयरमा दिनुहोस आवेदन